Rose Clock Live Wallpaper 🌹 4K Wallpapers Themes အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
4.4 | 500,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（23.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Rose Clock Live Wallpaper 🌹 4K Wallpapers Themes
Rose Cloud Wallpaper 🌹 4K Wallpapers thempapers the
သည် HD နောက်ခံ, နာရီ, မှော်ထိတွေ့မှု, Emoji, Emoji, Emoji, 3D နောက်ခံအိတ်များနှင့်အခြားအရာများပါသည့်အခမဲ့ Wallpapers app ဖြစ်သည်။
🌹 အခမဲ့ Live Wallpapers
Rose Cloud Wallpaper 🌹 4K Wallpapers The Wallpapers themappapers themapspapers themespapers များ, နွေရာသီပန်းပွင့်ပုံရိပ်များ, အနီရောင်ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင်ပန်းပွင့်နောက်ခံများ, နောက်ခံပြောင်းလဲခြင်း, ဘောင်များ, ကာတွန်းနှင်းဆီပန်း, မှော်ဂိတ်, endoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji, emoji) ။ အခမဲ့ Android Wallpapers
B> SHOWN Wallpapers များသည် Samsung Galaxy ဖုန်းများကဲ့သို့သော Android ဖုန်းများ, Xiaomi Live Wallpapers, Oppo ဖုန်းများနှင့်အခြားစာမျက်နှာများအနေဖြင့် P5W နောက်ခံပုံများ, နှင်းဆီနာရီ 4K live နောက်ခံပုံနှင့်အနီရောင်, ပန်းရောင်နှင့်နွေရာသီပန်းရောင်နှင့်နွေရာသီ boquet hd နောက်ခံပုံများသည်တက်ဘလက်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
clocks, frames များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးပါ , emoji, an animated နှင်းဆီပန်း, နောက်ခံ chother ကိုမှော်ထိတွေ့သို့မဟုတ်က 3D နောက်ခံပုံသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံ (darallax အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ 4D နောက်ခံပုံ (parallax နောက်ခံပုံ) ကိုပင်ပြုလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်းသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်!
ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည် အနီရောင်, ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင် 3D နောက်ခံပုံသို့မဟုတ် 4D နောက်ခံပုံ။ Parallax နောက်ခံပုံ 3D အနက် 3D အတိမ်အနက်ရှိပြီးသင်၏မျက်နှာပြင်နှင့်အနီရောင်, ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင် HD Wallpapers များကိုအေးမြသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
🌹 free နောက်ခံမျိုးစုံ HD နောက်ခံသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများကိုထည့်နိုင်သည်။ သင်မှော်ထိတွေ့မှုနှင့်အလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲသွားသောအလိုအလျောက်နောက်ခံပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
frose those live walkpaper သို့ဓာတ်ပုံဘောင်များထည့်သွင်းပါ။ r Lock Screen ရှိကာတွန်းနှင်းဆီပန်းကိုပြောင်းလဲပါ။ em Magic Touch admoji ထည့်ပါ သင်၏ကီးဘုတ်မှ
rose သင်၏အမည်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်စာသား app ကို add
Rose Cloud Live Wallpaper app ကိုအခမဲ့ထည့်ပါ သင်၏ Android ဖုန်းနှင့်မကြာခဏအေးမြသောနောက်ခံအကြောင်းအရာများအတွက် Wallpapers!
အကောင်းဆုံးသောနောက်ခံပုံများဖြင့်အကောင်းဆုံးနောက်ခံပုံများကိုအခမဲ့ရယူပါ။ HD Wallpapers app မှာ Live Wallpapers app မှာအခမဲ့ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းနောက်ခံပုံအက်ပလီကေးရှင်းများ။ Wallpaper hd ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ 🕙, သင်၏အမည် em, emoji animations 🆕, emoji ကာတွန်း👉, emoji ကာတွန်း👉, အမှုန် HD Theme ✨, အခြားတိုက်ရိုက် wallpapers:
ဘာအသစ်လဲ Rose Clock Live Wallpaper 🌹 4K Wallpapers Themes 6.7.14